रामेश@RaameshKoirala नेपालमा रोजगारी छैन। जनता जसरी पनि विदेश जान चाहन्छन् अनि म्यानपावर र मानव तस्करका जालामा पर्छन्। त्यसैले बेङ्गलुरु भएर मालद्विभ्स घुम्न जान दिल्लीमा निवेदन दिने सजिलो काम भन्दा अब हरीयो पासपोर्ट दिन नै बन्द गर्ने र लाहुरेलाई ट्राभल डकुमेन्ट दिने गर्नुपर्छ। घुम्नु नि आफ्नै देश! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > विविध > रामेश@RaameshKoirala नेपालमा रोजगारी छैन। जनता जसरी पनि विदेश जान चाहन्छन् अनि म्यानपावर र मानव तस्करका जालामा पर्छन्। त्यसैले बेङ्गलुरु भएर मालद्विभ्स घुम्न जान दिल्लीमा निवेदन दिने सजिलो काम भन्दा अब हरीयो पासपोर्ट दिन नै बन्द गर्ने र लाहुरेलाई ट्राभल डकुमेन्ट दिने गर्नुपर्छ। घुम्नु नि आफ्नै देश!
May 17, 2019 May 17, 2019 GRISHI550
May 3, 2019 February 25, 2021 GRISHI